Mahiga: ''Benayn keliya wax tarimeyso''
18 Jul 18, 2012 - 10:56:27 AM
Ergayga Qaramada Midoobey u qaabilsan Somalia Dr.Augustine Mahiga ayaa maanta 18 July,2012 ka hadlay eedeymaha loo soo jeediyey madaxda ugu sareysa dalka oo ku saabsan musuq maasuq iyo lunsasho hanti dadweyne.
Dr.Mahiga oo wareysi siiyey laanta Afka Somaliga ee BBC-da ayaa ka hadlay doorka ay leedahay kooxda dabagalka Qaramada Midoobey u qaabilsan Somalia iyo Eriteria oo horey cunaqabadeynta hubka qaabilsanaa balse gadaal loogu darey inay la socdaan musuq maasuqa.
Wakiilka Qaramada Midoobey ayaa wax laga weydiiyey maxay warbixinta xiliga lagu soo beegey maadaama dalka laga filayo inay dowladd ka dhalato? Ayuu ku jawaabey:.
‘’Arintaasu anaga ayay wal wal na gelisey ,kooxda soo diyaarisey warbixinta waa koox anaga naga madax banaan wakhti badana way ka shaqeynayeen ,anaga wax xiriir ah nagalama sameyn wakhtiga ay ku soo aadinayaan’’.
Sidoo kale waxa la weydiiyey Mahiga warbixintan waxa ku qoran waxey dhaleceynaa dhamaan siyaasiyiinta saa dalka u haraya hogaamintiisa? Ayuu yiri.
‘’Waxa jira dad kale oo laga yaabo inay isku soo sharaxaan jagooyinka sar sare iyo xildhibaano cusub ,dadka la dhaleeceyey waa inay ka daba tagaan ,arimahan kuma xirna oo keliya xiliga kala guurka waxa la eegaya maddada dheer gaar ah kuwa la xariira musuq maasuqa’’.
Ergayga Qaramada Midoobey Somalia ayaa la weydiiyey dadka la eedeeyey waxa ka mida madaxweynaha oo burcad badeed lagu tuhmey waxana uu yiri Mahiga’’ beeneyn keliya oo madaxweynaha ka timaada kuma filna ,waxana loo baahanyahay in madaxweynuhu iska difaaco waxyaabahan ka hor inta uusan Golaha Amaanka fadhigooda sameynin bisha dhamaadkeeda’’.
Dad badan ayaa isweydiinaya warbixinta guddiga dabagalka Qaramada Midoobey xiliga ay ku soo beegmatey iyo saameynta ay ku yeelanayso ololaha doorasho ay ku doonayaan inay ku xigsadaan kuraastooda masuuliyiinta ugu sar sareeyaa DF Somalia oo 31 maalmood u harsantahay.
Madaxweynaha PL oo ka qayb galey xoolo qaybin